Cameron.....: မိုးငွေ့ နှင့်သူ၏ခရေဇီများ.......
ကျမရဲ့ ခရေဇီတွေကိုပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ ဟိုးငယ်ငယ် ကလေးဘ၀ကနေ စရလိမ့်မယ်...။ ခရေဇီတွေဆိုတော့ ၀မ်းတွင်းမွေးရာပါ ၀ါသနာပဲပေါ့...။ကျမက စာပေ၊ရုပ်ရှင်၊ ဂီတအပြင်... ဖက်ရှင်ဘက်မှာလဲ စိတ်အား ထက်သန်ပါသေးရဲ့..။ ကျမ ၇နှစ် ၈နှစ်သမီးအရွယ်ကဆိုရင် အိမ်မှာ အဒေါ်တွေရဲ့ ကြိုးသိုင်းဒေါက်ဖိနပ်တွေကို ယူယူစီးပြီးဆော့တတ်တယ်...။ ( ကျမရဲ့ဇာတိက တာချီလိတ်မြို့နဲ့ မိုင်၃၀အကွာမှာရှိတဲ့ တာလေဆိုတဲ့မြို့လေးပါ..။ နယ်စပ်မြို့ဆိုတော့ ထွက်သမျှပစ္စည်းတွေကို အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူနိုင်တယ်လေ )...အဲဒီခေတ်ကအ၀တ်အစားတွေ ဖန်စီပစ္စည်းတွေက ခုခေတ်စားနေတာတွေနဲ့ဘာမှမကွာဘူး...။ အသားကပ်ခြေအိတ်ဝတ်တာ ကအစပေါ့...။ အ၀တ်အစားမှာ ဘာကိုခရေစီအဖြစ်ဆုံးလဲမမေးကြနဲ့ ကျမကခေါင်းကအစ ခြေထောက်အဆုံး အားလုံးကို ကြိုက်တာ...။ အ၀တ်အစား၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ ဖိနပ်၊ ပုဝါ၊ ဆွဲကြိုး၊နားကပ် အကုန်အကုန်ပါပဲ..။
၈တန်းကျောင်းသူ ဘ၀မှာတော့ ကျမကရန်ကုန်ရောက်နေပြီ..။ အဲဒီချိန်ကျမရဲ့ ခရေဇီကတော့ လက်ရေးစုတာပဲ...။ လက်ရေးလှတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီကနေ အမှတ်တရတွေရေးခိုင်းရတာပေါ့...။ အဲဒီစာအုပ်ကလေး ကျမမှာခုထိရှိတုန်းပဲ...။ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ စာရေးစက္ကူတွေကို စုတာဘက်ရောက်သွားတယ်...။ ကျမတို့ ဒုတိယနှစ် ကျောင်းပိတ်တော့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး မန္တလေး ဘူတာကြီးနားမှာ ဖက်ရှင်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်...။ လမ်းတော့ မမှတ်မိတော့ဘူး..။ ကြည်ပြာနဲ့ ဂင်ဇာဆိုတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ကိုးရီးယားက လာတဲ့ writing pad ခပ်ဆန်းဆန်းလေးတွေကို ၀ယ်စုတယ်...။ ဟိုတလောကမှ ကျမအခန်းရှင်းလို့ညီမတစ်ယောက်ကို အကုန်ပေးလိုက်တယ်..။ ဒီခေတ်ကစာရေးတဲ့ ခေတ်မဟုတ်တော့ ပေမယ်. ရုပ်ပုံလှလှခပ်ဆန်းဆန်းနဲ့ စာရေးစက္ကူတွေကို ညီမလေးကလဲ နှစ်သက်ပုံရတယ် ၀မ်းသာအားရနဲ့ ယူသွားတယ်...။
မန္တလေးရောက်တုန်းတလက်စတည်း ကျမရေဇီဖြစ်တဲ့ မန္တလေးက အစားအစာအကြောင်း ပြောရဦးမယ်...။
ကျမ မင်းသီဟက မုန့်တီနဲ့ ဗထူးကွင်းနားက မြီးရှည်ကိုသိပ်ကြိုက်တယ်...။ အကင်တွေအရမ်း hot ဖြစ်နေပေမယ့် ကျမက ရိုးရာအစားအစာကို ပိုကြိုက်တယ်....။ ရှမ်းပြည်မှာမွေးတော့ ရှမ်းစာက ဘာပြောစရာလိုမလဲ...ကျမရဲ့ခရေဇီတွေပဲပေါ့...။ ခုတော့လဲ မနိုင်းနိုင်းစနေဘလောက်ထဲက ရှမ်းစာတွေကိုပဲ သရေယိုနေရတော့တာပေါ့...။ ရန်ကုန်မှာလဲ ရနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်..တကယ်တမ်း ရှမ်းပြည်မှာ စားရတာ လောက်တော့ မကောင်းတာအမှန်ပဲ...။ တလောက ကျမတို့ အိမ်နားက လားရှိုးဆိုတဲ့ ရှမ်းဆိုင်မှာ ညီမတစ်ယောက်နဲ့ မနက်စာသွားစားဖြစ်တယ်...။ လုံးဝစားမကောင်းဘူး....တကယ်...။ အဲဒီလိုကျပြန်တော့ မန်းကိုသတိရသား...။ ၇၃ လမ်းပေါ်က နေရောင်ခြည်ဆိုတဲ့ ဆိုင်က ဂျုံဆီချက်ကိုတောင်အမှတ်ရမိပါရဲ့....။ တစ်ခါတုန်းက မန္တလေးည ဆိုတဲ့ ကိုအငဲရဲ့ သီးချင်းထဲကအတိုင်းပေါ့ ...။ ညဘက် ကျုံးဘေးမှာ ဆိုင်ကယ်စီးရတဲ့ အရသာတို့ ဘာတို့ ပေါ့..။ အဲ ခရေဇီတွေ အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဘေးချော်ထွက်ကုန်ပြီ...။
စာအုပ်တွေ စဖတ်ဖြစ်တော့ မန္တလေး ၁၂ ကျောင်းစတက်တုန်းကပေါ့ ..။ ခုနှစ်တက်တုန်းကပေါ့ ....။ အဲဒီတုန်းက ဗီဒီယိုခွေတွေ ဘာတွေလဲ သိပ်မရှိတော့ ညနေဆို စာအုပ်ဆိုင်သွား...ကာတွန်းတွေ၊ ရုပ်ပြတွေ ငှားဖတ်တာပေါ့..။ ၀တ္ထုစဖတ်တော့ ဆရာမဂျူးရဲ့ အမှတ်တရ ဆိုတဲ့စာအုပ်ကို အရင်ဆုံးစဖတ်ဖြစ်သွားတယ်...။ ခုထိလဲ ဆရာမရဲ့ ၀တ္ထုတွေကို ထွက်တ်ိုင်းဝယ်စုဖြစ်တယ်...။
ဆရာမရဲ့ အမှတ်တရဆိုတဲ့ ၀တ္ထုက ဝေဖန်ခံရဆုံးဝတ္ထုလေ....။ ကျမခရေဇီအဖြစ်ဆုံးစာအုပ်ထဲမှာပါတာပေါ့...ပြီးတော့ ချစ်သူရေးတဲ့ ကျမရဲ့ညတို့ ၊ ပင်လယ်နှင့်တူသောမိန်းမများတို့ ပေါ့ ..။ မရှိမဖြစ်မိုးဆိုလဲ သိပ်ကောင်းပါတယ်...။
နောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ စာအုပ်တွေကတော့ ဘ၀ပိုပြီးဆန်လာတယ်...။ ဆရာဖေမြင့်ရဲ့ စာအုပ် အတော်များများကိုလဲ ၀ယ်ဖတ်ဖြစ်တယ်...။ ဆရာ့ရဲ့ စာဖတ်သူတို့ ရဲ့မှတ်စုတို့ ၊ chicken soup ဆိုတဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်တွေ ကတော့ကျမရဲ့ ခရေဇီတွေပေါ့ ..။ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဆို အနုပညာမြင်ကွင်းပုံမှန်ဖတ်ဖြစ်တယ်...။
ဂီတဘက်မှာဆို ကျမအရမ်းရူးသွပ်ရတာကတော့ Mariah Carey ပဲ သူ့ သီချင်းတွေဆို အကုန် ကြိုက်တယ်..။ သူ့ ရဲ့ဘုရားပေးတဲ့ အသံကတော့ အံ့မခန်းပါပဲ တကယ်...။ သူ့အသံက ကောင်းလွန်းတော့ Divas စာရင်းဝင်ထဲတောင်ပါတယ်လေ..။ ကျမ အခွင့်ရမယ်ဆိုရင်လေ သူဆိုမယ့် ကမ္ဘာလှည့်ပွဲမှာ လက်မှတ်ဘယ်လောက်ပဲ ဈေးကြီးကြီး တခါလောက် သွားကြည့်ချင်သေးတယ်....။
ကဲ .. အဲဒီလောက်ရူးသွပ်တာလေ..ကျမက..။ မြန်မာအဆိုတော် မှာတော့ ကိုလေးဖြူ၊ ကိုအငဲ၊ တင်ဇာမော်တို့ကိုကြိုက်တယ်...။
သူတို့ သီချင်းတွေ ဆိုသံဆိုပေါက်တွေက ဘယ်သူနဲ့ မှမတူဘဲ ကွဲထွက်တယ်...။ ပြီးတော့ ဘ၀ဆန်တယ်...။
ခုလောလောဆယ်တော့ ကိုလေးဖြူရဲ့ နောက်ဆုံးထွကတဲ့ BOBထဲက လမင်းနဲ့စာမျက်နှာ၁၅ ကတော့ ကျမရဲ့ ခရေဇီစာရင်းဝင်ပေါ့....။
Posted by coral nyo at 05:20
မန်းကိုလွမ်းပြီး ပြန်ချင်အောင်လေ လုပ်ပြန်ပြီ အဟင့် :(
16 April 2009 at 13:49
မန္တလေးကိုတော့ ညီမ ၃ခေါက်လောက်ပဲရောက်ဖူးတယ်။
တိုက်ဆိုင်တယ်..အမ။ ညီမ အမကိုပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့
၀တ္ထုက ဆရာမ `ဂျူး´ ရဲ့
`ချစ်သူလားစကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ်´ ဆိုတဲ့စာအုပ်အမရဲ့..အမဖတ်ပြီးပြီလားတော့မသိဘူး..။
sorry နော် အမ။
9 August 2009 at 11:55
ဒုတိယပိုင်းလေးး လုပ်ပါအုံးးးဗျ . .မျှော်နေမယ် . .